Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Hungary
Kövirózsa u. 1.
Ọ na-ewe otu awa na nkeji iri
A na-ahazi ọrụ ọgbakọ Ndịàmà Jehova karịrị narị abụọ na iri asatọ na-arụ na Hungary, na-ahazikwa otú ihe si aga n’ọgbakọ anyị na-eji asụsụ Hungarian amụ ihe na Slovakia nakwa na Ukraine. A na-asụgharị akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl n’asụsụ Hungarian nakwa n’asụsụ Lovári. A na-emepụta ihe ndị a na-egere egere n’asụsụ Hungarian, na-emepụtakwa vidio n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Hungary.
Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Dị na Hungary